I-Spam Samaritans ayisebenzisi kuphela iiakhawunti zabo ze-imeyile ukunxibelelana, kodwa ikwa negalelo ekupheliseni ugaxekile kwabanye. Kwimpelaveki ephelileyo umazala wayechaza indlela amshiya ngayo kuYahoo! iakhawunti ye-imeyile kwaye wafudukela kwi-Gmail, kuba yayi, "yonke igcwele i-SPAM kwaye ayinakufundwa." Into angakhange ayiqonde kukuba le ndlela yokuziphatha ibenzakalisa ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi (i-ISPs), abathengisi kunye nabagaxekile ngokufanayo.
Ababoneleli beenkonzo ze-Intanethi (ISPs) ufuna ingxelo ukuphucula amava akho e-imeyile. Ngaphandle kwabasebenzisi bokufaka izikhalazo kunye nokumakisha i-imeyile njengogaxekile, Ii-ISP awunalo igalelo lokukhusela abasebenzisi ekuphathweni gadalala.
abaninzi Ii-ISP baqala inkqubo yokuhambisa imiyalezo kwi-spam / kwifolda eninzi kunye nokubeka esweni ukuba abasebenzisi bayazilungisa. Ngaphandle kongenelelo lomsebenzisi, abathengisi be-imeyile baqala ukuba nemicimbi yedumela, ephazamisa ukuhanjiswa kwabo.
Iidilesi ze-imeyile ezilahliweyo azicinywanga, zininzi Ii-ISP uyakubuyisa iakhawunti kwaye ayisebenzise njengomgibe wogaxekile ukuze unyothule ngaphandle abathumeli abakhohlakeleyo. Oku kubeka emngciphekweni abathengisi abasemthethweni abaqhubeka nokuthumela ii-imeyile, kuba abayazi iakhawunti ishiyiwe.
Abathengisi uya kusebenzisa uvavanyo lwe-A / B, ukuvula, ukucofa kunye nokuguqula ukuphucula imiyalezo yabo kunye nokuphucula ukubandakanyeka komsebenzisi. Nokuba ukhetha ukurhoxa kwimiyalezo yabo, Abathengisi ufuna, kwaye imfuneko ukuba unxibelelane.
Ugaxekile Ndifuna nje ukuhambisa imiyalezo! Abakhathali nokuba ibetha ibhokisi yakho engenayo okanye ugaxekile / ifolda eninzi. Ngokungahoyi ukuhlaselwa kwemiyalezo engafunekiyo, bafumana oko bakufunayo. Abasebenzisi banokulungisa kuphela umba ngokumakisha le miyalezo njenge ispemu, kunye nokwazisa ii-ISPs ngalo mbandela.
Ukuziphatha kweli bali kukuchitha imizuzu embalwa ukuphonononga okuhle nokubi ugaxekile kunceda ukwenza i-imeyile ibengcono kuwe nakwabanye abasebenzisi. Sukuyityeshela loo imeyile evela kubathengisi okanye kubathengisi. Ngokuzikhupha kubhaliso, ukumakisha i-imeyile njengogaxekile, okanye ukususa i-imeyile kwisiqulatho / kwifolda yogaxekile, uphucula amava e-imeyile kuye wonke umntu.
Nceda umkhwekazi wam aphume, kwaye wenze umhlaba we-imeyile ube yindawo ebhetele… Yiba ngumsamarham wogaxekile!
tags: Ukuphicothwa kweBrandicantaloupeimisingaIzibalo ze-imeyile eziphathwayouphuhliso lwemvelisorepinssomediaiswiphi yophando
UBill Dawson yintengiso ye-imeyile kunye nesicelo se-imeyile, ukubonisana neenkampani ezinkulu kunye nesoftware njengababoneleli beenkonzo ngokudityaniswa kwe-imeyile, ukusebenziseka kunye nokuhanjiswa. UMthetho oYilwayo usebenze neminye imibutho emikhulu kwi-Intanethi, kubandakanya Zappos kwaye WalMart. Yena kunye nenkosikazi yakhe, uCarla, bangabanini kwaye basebenzela iarhente yabo, Uyilo lweenja ezi-4.
Nceda Chaza iJargon yoShishino kunye neAcronyms
Mar 19, 2010 ngo 1:05 PM
Ukuthengisa nge-imeyile kuye kwaba yenye yeendlela ezisetyenziswa ngokubanzi kwintengiso ekwi-Intanethi, nto leyo ekhokelela ekubeni ibe yenye yezona zinto zisebenza kakuhle kumashishini. Spam iqhelekile ngoku kwaye iya kuqhubeka nokwenzeka.
Yintoni abanini beshishini ekufuneka beyazi kukuba ugaxekile luya kutshabalalisa ii-brand zabo kwixesha elifutshane, ekubeni le iyinto engenamsebenzi kwaye inganiki ziphumo zininzi kunokuba zinoluhlu lokungena.